Regulation ah Suuqa Crypto in 2018 - Blockchain News
Khubarada waxay aaminsan yihiin in 2018, waxaan ka filan karaa in dawladaha kordhin doonaa gacanta suuqa ICO, weydaarsiga cryptocurrency, iyo ganacsatada. Isla mar ahaantaana, bangiyada dhexe ee waaweyn ee dunida mahad cryptocurrency ka iman kara-gaar, Seeraar-iyo diyaar u yihiin in ay u iibsadaan sanadka soo socda. Waxaan ka baaray waxa tilmaamaha habka hay'adaha maaliyadeed kala duwan xagga suuqa crypto horumar doonaa 2018.
maamulka Sannadkan lacageed dalal badan ayaa ku soo bandhigay xeerka ICO oo muujiyey sida ay aragti xagga this of jiidanaya maalgashi. Sidaas, Shiinaha iyo South Korea si rasmi ah mamnuucay ICO la qabtay dhulkooda. On lid ku ah, Maraykanka, Canada, Switzerland, Japan, Singapore, iyo U.A.E. go'aano dhowr ah soo saaray in la oggalaado ICO rasmi ah, la ICO lagu sakhiray in maamulka xeer maaliyadeed. calaamadihii soo saaray sharciyada hadda jira dhici karaan, tusaale ahaan, mid ka mid ah sharciyeynta xawaalad interfund. Sida laga soo xigtay Jerry Brito, Agaasimaha Fulinta ee ururka aan macaash quful-Center, Dawladaha raaci doona Tusaale ahaan Mareykanka iyo in la kordhiyo gacanta iibka calaamo in 2018. In USA, qaar ka mid ah calaamadihii gaar ah ICO ah waxaa loo arkaa securities-ka iyo nidaaminaya sharciyada la xiriira. Stephen Obie, lammaane at adag sharciga caalamiga ah Maalinta Jones, muujinayaa fikrad la mid ah:
“Waxaan qabaa in la caddeeyo sida xaqiiqada ah oo dheeraad ah ku soo noqon doonaa oo ku saabsan iyada oo loo marayo tallaabooyin fulinta iyo Hanuun kale in SEC u siin doonaa in suuqa tokenized. jaangooyaha ogyahay oo ku saabsan suuqa this iyo waxa si dhab ah qaadataa.”
Khubarada waxay aaminsan yihiin in falalka la mid ah ICO waa la qaadi doonaa in la ixtiraamo cryptocurrency, khaas ahaan, Seeraar. dmitriy Zhulin, co-aasaasaha INS deegaanka, deggan dul arrintan:
“Sida Hoargaysa Seeraar, xeerka ugu horeysay maayaan ICOs ka dibna u guurto on in ay cryptocurrencies, si kastaba ha ahaatee, way adag tahay in la saadaaliyo hadda haddii ay tani waxay yeelan doonaan natiijo togan ama taban for warshadaha. Inkasta oo uu kordhay in xeerka bannaan ee crypto, Waxaan aaminsanahay in blockchain sida technology aan loo hor joogsan doona xeerka culus.”
xawaalad Seeraar waxaa hore u mamnuucay in wadamada, sida Bolivia, Ecuador, Hindiya, Bangladesh, Iceland, Kyrgyzstan, Morocco, Nepal, Malaysia, Indonesia, iyo Taiwan. Isla mar ahaantaana, Shiinaha, halkaas oo la mamnuucay in ay ku ganacsan on dhaafsi cryptocurrency degaanka, iyo Russia ayaa isku diyaarineysa biilasha of regulation cryptocurrency, kaas oo iman kara dhaqan galay 2018. In Maraykanka, Seeraar maal yeelan doonaan in ay soo sheegaan guulaha Adeegga Cashuuraha Gudaha (IRS) iyo canshuur bixiso sida ay Notice 2014-21.
on December 4, UK iyo EU xakameeya dhaqaale sheegay in ku saabsan qorsheynta noqotay sharciga hoostiisa cryptocurrency ganacsatada iyo maal-, mararka qaarkood, in loo baahan doono in ay soo bandhigto ay macluumaadka shakhsiyeed, iyo is-weydaarsiga cryptocurrency lahaa si ay u siiyaan maamulka inay helaan macluumaad user. Sida laga soo xigtay meydadka dhaqaalaha gobolka, qiyaastaas oo kale waa loo baahan yahay si looga hortago in dhaqdhaqaaqa lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada. Iswaafajinta habab kala duwan xagga arrintan la dhamaystiri doono horaanta 2018, iyo sharciga way iman doonaan dhaqan galay dhamaadka sanadka soo socda.
bangiyada dhexe G7 oo cryptocurrency
Aayad kasta waxay muujinaysaa xoojinta ee xeerka suuqa crypto ah by maamulka maaliyadeed ee dalal kala duwan. nidaamiyo, si kastaba ha ahaatee, arki kara in cryptocurrency sidoo. In 2018, bangiyada dhexe G7 bilaaban doona iibsashada cryptocurrencies ay u xoojiyaan kaydka ay shisheeye. barta A iyo leexashada loogu talagalay bangiyada dhexe G7 ay noqon doontaa markii xaraf suuqa Seeraar ka badan qiimaha JDS oo dhan (xuquuqda sawirka gaarka ah). Waa hanti reserve caalamiga abuuray by Hay'adda Lacagta Adduunka (IMF) si ay u kaabaan dalalka xubnaha ka’ kaydka rasmi ah. xaraf Seeraar, tusaale ahaan, ayaa hore u dhaafto qiimaha JDS (ku dhowaad $291 billion).
Qodob kale oo tankeeda noqon doono xaqiijinta in qiimaha lacagaha G7 waxaa devaluing ka dhanka ah cryptocurrencies. In 2018, waxaan markhaati doonaa Seeraar iyo cryptocurrencies kale noqday lacagaha caalamiga ah ee ugu weyn hantida suuqa, sida laga soo xigtay khubaro.
lacagta digital Qaranka
By abuuraya lacagaha digital qaranka, dalal badan yihiin xataa qorsheynayaan in ay u turjumaan lacagaha ay qaranka si blockchain. Jim Angleton, Madaxweynaha tegeyay FinServ Corp, waa la hubiyo in tirada dalalka soo saara lacagaha sida kori doono oo kaliya:
“Waxaan ognahay in maalmahan 108 dalalka ay tijaabinayaan bixinta lacagaha digital ay guushu ku dul $ U D baabi'inta ay lacagta waraaqaha iyo ka baxayso ku tiirsanaanta. Waxaan aaminsan nahay 20+ Dalalka bilaabi doonaan Imtixaanka Beta dhinaca gool ay.”
Bishii October ee, waxaannu nimid in la ogaado in Russia heli lahaa u gaar ah lacagta digital qaranka, cryptoruble. dawladdu way ka qaadi doonaa gacanta ku soo saarista iyo wareegga of cryptoruble ee Russia, la macdanta cryptocurrency noqday wax aan macquul aheyn. Sidoo kale, Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro soo saaray edbinta ah, sida laga soo xigtay oo olole caalami ah oo cryptocurrency qaranka El Petro ayaa la qorsheeyey in sanadka soo socda. kaydka khayraadka dabiiciga ah Venezuela, sida dahab, saliidda, iyo dheeman, dib u lahaa El Petro.
ganacsi ICO iyo crypto ayaa si rasmi ah u mamnuucay in Shiinaha, laakiin waxa ay ahayd dalkii ugu horeeyay ee in tijaabiyey noocooda ah digital ah ee lacagta qaranka. Yao Qian, oo madax ka ah Waaxda Research Digital Lacagta ee Dadka Bank of China, ayaa sheegay in jaangooyaha dhaqaale waa in cryptocurrency qaranka u adeega lahaa sida mid curdan ah oo sharci ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka.
Bishii December ee bangiyada dhexe ee Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia bilaabay initiative pilot lacagta gudba xuduudaha ah. lug ee bangiga dhexe ee Saudi Arabia waa caan ah, siiyo in ka hor ma jirin statements rasmi ah oo ku saabsan cryptocurrency, suuqa crypto, ama blockchain by nidaamiyo dhaqaale ee dalka. U.A.E. The, in ay markeeda, waxaa soo koraya tiro ka mid ah mashaariicda blockchain in ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha, iyo Global Blockchain Golaha Dubai waa mas'uul ka ah dad badan oo iyaga ka mid ah.
Regulation ah Suuqa Crypto